Ngwa akụrụngwa kachasị mma iji kpochapụ atụmatụ ụlọ ọrụ ịde blọgụ | Martech Zone
Tuzdee, Machị 13, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Na njikere maka ịgwa ndị Nkọwa Otu gbasara ịde blọgụ Corporate, ejirila m ọtụtụ saịtị nweta ihe ole na ole. M ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na anaghị m ekele ha n’ihu ọha. Nakwa, Ana m enye ndị na-ede akwụkwọ aka na akụ na njikọta na weebụsaịtị ndị a.
Iji gwa gị eziokwu, n'oge gara aga, m na-emegide ịde blọgụ ụlọ ọrụ dịka atụmatụ. N’ezie, edere m ya n’akwụkwọ mechie n'ihi na nke ahụ na-abụkarị ihe na - eme mgbe ị gbalịrị ịhazi ma ọ bụ tụọ ya na blọọgụ. Ọ ga-abara gị uru. Ahụla m ọtụtụ ihe atụ dị ukwuu nke ịde blọgụ nke ụlọ ọrụ dị mma iji megide ya ọzọ. Ndị ụlọ ọrụ ga-emehie ma ọ bụrụ na ha etinyeghị teknụzụ a na atụmatụ nkwukọrịta ha.
Gini mere enwere ike inweta ihe nlere?
N'oge na-adịbeghị anya, amalitere m ịmara ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị na-enwe ekele maka ịde blọgụ na-enye ụlọ ọrụ ha na ndị ahịa ha, kpọmkwem:
Na-enye ụlọ ọrụ na ndị ọrụ ha ihe ngosi dị ka ndị isi chere na ụlọ ọrụ ha.
Mma visibiliti nke ụlọ ọrụ. N'ezie, dị ka ụfọdụ ọnụ ọgụgụ si kwuo, 87% nke ụfọdụ nleta na weebụsaịtị ụlọ ọrụ na-eme ya ebe ahụ site na blọọgụ.
Na-enye ndị ọrụ gị, ndị ahịa gị, na atụmanya ihu mmadụ na ụlọ ọrụ gị.
Ọ na - enyere blogosphere na teknụzụ injinịa aka iji melite ụlọ ọrụ gị ịchọta na Ịntanetị.
Etu esi ewepu:
Iji mezuo nke ọma, enwere ụfọdụ ndụmọdụ dị ukwuu na net. Lee ụfọdụ ihe atụ:
Chee echiche banyere ijikọ kọmitii blọọgụ nke na-ahụ maka blọọgụ, ọdịnaya, na-eme ka ndị na-ekere òkè, ma kwado blọọgụ maka ụlọ ọrụ.
Gbaa ndị na-ede blọgụ gị ume ka ha gụọ blọọgụ ma nweta ndụmọdụ ha na blọọgụ. A na-ele ahịa na mgbasa ozi mgbasa ozi dị ka onye na-abụghị onye ma na-elelị ndị na-ede blọgụ anya - na-abụkarị n'ihi ntụgharị, enweghị obi eziokwu na ọdịnaya akwadoro.
Kọwaa isiokwu echebara echiche maka blọọgụ gị, nzube ya na ọhụụ gị. Gwa ha ihe na blọọgụ gị nke ọma ma chọpụta etu ị ga-esi mee nke ọma.
Mee ka ihe ngosi gi buru uzo mee ihe. Akụkọ akụkọ bụ ụzọ kachasị dị irè isi zie ndị mmadụ ozi gị. Ndị na-akọ akụkọ ọma na-enwe mmeri mgbe niile.
Soro ma sonyere ndi na agu akwukwo gi. Nye ha ohere ka ha nwee mmetụta na nzaghachi na isiokwu gị ma jiri nkwanye ugwu dị ukwuu na-emeso ha. Soro na blọọgụ ndị ọzọ ma jikọta ha. Ọ bụ 'ọnọdụ nke mmetụta' nke ị ga-ejikọrịrị.
Mee ntụkwasị obi, ikike na akara aka gị. Zaghachi ngwa ngwa na n'ụzọ dị irè. Ka ị na-ewulite ntụkwasị obi, otu a ka ụlọ ọrụ gị ga-esi.
Mee ngwa ngwa. Blọọgụ abụghị maka post, ọ bụ maka usoro nke post. Blọọgụ kachasị ike na-ewulite aha na otuto site na ịkwanye ọdịnaya dị mkpa oge niile.
Nke a bụ ọhụụ m maka axis 3 nnukwu usoro ịde blọgụ gụnyere, ndị Blogang Triangle:
Otu trackback kwuru na post na imewe ahụ na-efu na atụmatụ niile. Mgbe anyị na-ekwu maka ya Atụmatụ ịde blọgụ nke ụlọ ọrụ, Ekwenyere m na imewe ahụ dị ezigbo mkpa - mana ọ bụ azịza ahịa. Enwere m olile anya na ụlọ ọrụ enweworị ọmarịcha weebụ yana ọnụnọ ya tupu amaba n'ime ịde blọgụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ha kacha mma tinye ya na ndepụta ahụ!
Kedu ihe egwu dị?
Na nzukọ nzukọ ọgbakọ na nso nso a, anyị jụrụ otu n'ime ndị bịara anyị, onye ọka iwu, ihe iwu kwadoro gbasara ndị ọrụ ịde blọgụ. O kwuru na ọ bụ n'ụzọ doro anya otu ihe ahụ dị ka onye ọrụ ahụ na-ekwu okwu n'ebe ọ bụla ọzọ. N'ezie, ọtụtụ akwụkwọ ndekọ aha ndị ọrụ na-ekpuchi atụmanya nke omume ndị ọrụ ahụ. Ọ bụrụ n’inweghị akwụkwọ ọrụ ndị na - ekwu maka omume ndị ọrụ gị tụrụ anya ya, ikekwe, ikwesịrị! (N'agbanyeghị ịde blọgụ).
Nke a bụ nkọwa dị egwu banyere D's na B DONGH of nke ịde blọgụ site na iwu.
Fọdụ ihe ndị ọzọ iji tụlee:
Olee ihe ị ga-eme banyere nkatọ, esemokwu na-adịghị mma, na ịza ajụjụ? Ọ bụ ihe amamihe dị na ịhazi atụmanya n'ihu etu esi edozi okwu na anabata na blọọgụ gị. M ga-agba ume ikwu okwu maka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ọ bụla.
Kedụ ka ị ga - esi hụ akara aka? Chọghị ndị na-ede blọgụ gị iji slogans, logos, ma ọ bụ olu nke akara gị. Mee ya aka.
Kedụ ka ị ga - esi mesoo ndị na - ede blọgụ gị na - anaghị arụpụta ọrụ? Mee ka ndị na-ede blọgụ gị kwenye iwu tupu aka ebe nsonye abụghị naanị iwu, mana ịla azụ ga-efu ha. Nye ha buut! Nọgide na-enwe agbanwe agbanwe nke isiokwu bụ isi ihe ọ bụla ịde blọgụ atụmatụ.
Kedu ihe ị ga - eme banyere ikpughe ihe ọgụgụ isi nke bụ isi maka azụmaahịa ụlọ ọrụ ahụ?
Akwụkwọ iji gụọ isiokwu:
Gingde blọgụ maka Dummies - Ọ bụ m dere!
Akwụkwọ ịde blọgụ: Kpamkpam Ihe You Kwesịrị Knowmara Iji Nweta Ya.
Ndị Aboriginal: Ntuziaka nke Business Ugbu a: Ebumnuche, Nomadic, na-agbanwe agbanwe.
Mkparịta ụka gba ọtọ: Otu blọọgụ na-agbanwe Wayzọ azụmahịa si ekwu okwu na ndị ahịa.
Ndụmọdụ ịde blọgụ nke ụlọ ọrụ na akụrụngwa
Ozi niile nke m tinyere na post a sitere n'ike mmụọ nsọ site na otu n'ime ọtụtụ njikọ dị n'elu ma ọ bụ na ndepụta a n'okpuru. Enwere otutu ederede edere na nkọwa zuru ezu ebe a. Achịkọtara m ihe niile m nwere ike ịnwale ma gbalịa itinye ya n'otu post nke ga-enye nnukwu nyocha nke ọtụtụ echiche ndị ọkachamara banyere atụmatụ ịde blọgụ ụlọ ọrụ. Enwere m olileanya na ndị nwe blọọgụ ndị a nwere ekele maka ya - ha kwesịrị otuto niile maka ọkwa a!
M ga-agba onye ọ bụla bịara ileta oge ka ọ nọdụ na nke ọ bụla n'ime blọọgụ ndị a. Ha bụ ihe ndị dị ịtụnanya!
Ọmụmụ ihe ịga nke ọma na blọgụ nke Mahadum Northeast
Nkwupụta Nkwurịta Okwu
Agbataobi Gburugburu ụwa
Onye njem ala ahia
Onye nyocha Squarespace
Bloga Ahịa Blog
Ingmepụta Ndị Ọrụ Omiiko
Ihe Nlereanya Blogging
Nke a post ga-zuru ezu na-enweghị na-enye ụfọdụ Bloglọ ọrụ ịde blọgụ njikọ. Arefọdụ bụ ukara blọọgụ ụlọ ọrụ mana echere m na ọ dị mkpa ile anya enweghị iwu blọọgụ ụlọ ọrụ yana. Ọ na-enye ụfọdụ ihe akaebe na ọ bụrụ na ị kpebie ịghara ịde blọgụ gbasara ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ akara gị, onye ọzọ nwere ike!
Nbudata Ntanetị Microsoft Microsoft
Nchịkọta Google Blog
Matt Cutts: Ngwa, Google na SEO
Blog nke DreamHost
Ulo oru na-akwadoghi BlogHost Blog
Si Ebe M Na-anọdụ
Yahoo Chọọ Blog
Njikwa Nchọgharị gingde blọgụ
Ndị ọchụnta ego na ndị ahịa na-enyocha azịza ha n'ịntanetị na-esote site na iji ọdịnaya na blọọgụ ụlọ ọrụ na-enye ọdịnaya ahụ. Nke ahụ kwuru, enwere usoro ị ga - emerịrị iji bulie ikpo okwu gị (ọkachasị WordPress) yana ọdịnaya gị. Mgbe ị na-ewepụta ihe na-acha uhie uhie na Google, ha na-edepụta ọdịnaya gị ma gbasaa iru ọdịnaya gị nke ọma. Bryant Tutterow edeela usoro na ịmepụta blọọgụ gị - gbaa mbọ gụọ ya ma kpọọ oku DK New Media ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka.
Biko nweere onwe gị ikwu okwu ma tinye Ọdụm gingde blọgụ ọkacha mmasị gị!
Tags: ịde blọgụịde blọgụ ntuziakaịde blọgụụlọ ọrụ ịde blọgụụlọ ọrụ ịde blọgụ ihe atụụlọ ọrụ ịde blọgụ maka dummitesụlọ ọrụ ịde blọgụ ntuziakaụlọ ọrụ ịde blọgụ azum
ekele maka ịkọgharị ihe ịga nke ọma n'ịgụ blọgụ. Dị ka otu n'ime ndị isi abụọ na-ede akwụkwọ ahụ, ọ bụ ebumnuche anyị iji nyere obodo aka ị nweta ụfọdụ ndụmọdụ maka ịde blọgụ.
Ọ bụ ọmarịcha ọmụmụ. Emeela m n'ime ya mana enweghị m ike ichere igwu n'ime ya nke ọma. I meela nnukwu ọrụ site n’inye ihe a! Ị mere nke ọma!
Chee echiche banyere itinye ọnụ na kọmitii blog na […] kwadoro blọọgụ maka ụlọ ọrụ ahụ.
Yabụ nke blọọgụ ụlọ ọrụ ga-abụ nchịkọta okwu ahịa kwa ụbọchị / kwa izu? Dị ka gị onwe gị na-ekwu:
Marketing na Press Release resources are […] led down over […] n'ihi na nke […] tupu mma ọdịnaya.
Echere m na ọ gwụla ma ị dị njikere ịmeghe ma ọ bụghị naanị ihichapụ okwu na-adịghị mma, ụlọ ọrụ nwere ike ịrapara na atụmatụ weebụ gị ochie. Dị nnọọ ka atụmatụ iji melite ogo ọchụchọ ga-ekpughe dị ka naanị.
N'ịgụ ihe nke abụọ, okwu ikpeazụ m kwuru dị njọ. Nke ahụ abụghị nzube ya. Great post ị dere, Douglas.
Naanị m na-atụ aka na ụlọ ọrụ kwesịrị ịhụ blọọgụ karịa naanị ngwa ahịa ọzọ. Ọ bụ onye ahịa nye onye ahịa, mana ọ bụrụ na ejiri ya a) n'ihu ọha na b) dị ka ngwa nkwukọrịta ụzọ abụọ.
Anaghị m ewere ya na-adịghị mma, Martin. Ekwenyere m na gị… Echeghị m na Kọmitii Blog kwesịrị ịnabata ụdị ọdịnaya ọ bụla - mana echere m na kọmitii kwesịrị iwepụta oge iji hụ na blọọgụ na-anọgide na ọdịnaya, na-enye ndụmọdụ na nzaghachi, ma na-enwe oge.
Ekwenyere m - ọ bụrụ na kọmitii blog na-enyocha, na-edezi, ma na-enyocha ọdịnaya - blog ga-efunahụ ntụkwasị obi ya na ọgụgụ ya n'otu ntabi anya. Eji m n’aka na m ga-eme ka nke a doo anya n’ozizi m.
M na-ekweta… ma ọ bụrụ na ị nọgidere interject ahịa na PR atụ ogho dị ka akụkụ nke gị ịde blọgụ atụmatụ, ị nwere ike dị ka nke ọma dị nnọọ ịnọgide na-enwe a website!
Doug - nnukwu post! Ana m arụ ọrụ na ịmepụta ụlọ ọrụ blog ugbu a ma achọtala ọtụtụ ihe m ga-eji na post a. Ọrụ dị mma - daalụ!
Daalụ nke ukwuu, Patrick! Enwere m download ka mma, ma oburu na ichoro iji ya. M nnọọ tinye ya n'abalị a (mgbe bipụtara a tojupụtara na Kinkos maka echi)
Ken obi ojoo
Enwere m ọchịchọ ị nweta akwụkwọ siri ike ma ọ bụ ihe m nwere ike ibipụta maka ọmụmụ ihe ahụ. Na-akpali m ka m weta nke a na ndị ahịa.
Echere m na otu n'ime m ibu ahịa nwere ike iru a "clog"
Dec 13, 2007 na 10:05 PM
Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ụfọdụ ihe atụ ntanetị ụlọ ọrụ sitere na ụlọ ọrụ ndị na-abụghị teknụzụ.
Dee 14, 2007 na 2: 54 AM
Nke ahụ bụ ezigbo nzaghachi, ịu! Achọrọ m ịkwado ụfọdụ ihe atụ ndị ọzọ. Echere m na e nwere ụda n'ụgbọ njem.
Ratelọ ọrụ ịde blọgụ dị ka atụmatụ bụ nnukwu echiche maka ndị ọzọ ..
Kama iji mgbasa ozi mmekọrịta iji kwalite azụmahịa ahụ, anyị kwesịrị ịmalite ịmepụta blọọgụ nke metụtara ọtụtụ ihe dịka ide ederede nke na-adọta uche ọha na eze ma ọ bụ onye ahịa nwere ike, nhọrọ ziri ezi nke isiokwu yana nke kachasị mkpa na-enye ọdịnaya ọdịnaya bara uru. ndị na-agụ ya.
Nke a ga - enyere gị aka ịnọ ogologo oge n’ahịa ma kwalite azụmahịa gị.
Skytech - Blogger si Malaysia